Yakabatanidzwa plugins, misoro, uye masevhisi neWPSOLR
musha » Yakabatanidzwa plugins, misoro, uye masevhisi
Sanganisa yako yekutsvaga yeWebhusaiti nema plugins akakurumbira, misoro, uye masevhisi
Hapana imwe muripo. Isa mapulagi ako senguva dzose, uye WPSOLR ichavabatanidza pachena kuti uwane kutsvaga kwako.
WPSOLR inosimbiswa neWPML
Kwidziridza Toolset Views Archives
Index uye tsvaga Tsika Post Mhando, Minda Uye Mutero.
YITH WooCommerce Ajax Tsvaga
Ratidza mazano neYITH WooCommerce Ajax Tsvaga uye unzwe, asi yakagadzirirwa neWPSOLR yekutsvaga
Pinza yako mameseji ekutumira, uye unongedze ivo seamless ne yedu cron API kana mune chaiyo-nguva
Tsvaga post mitundu ine zvinyorwa zvinosanganiswa nePD Embedder
Google Driza Embedder
Tsvaga zvinyorwa zvemhando zvine magwaro akaiswa neGoogle Drive Embedder
Ratidza / viga zvawanikwa zvichienderana nevashandisi Mapoka profiles
Tsvaga mumamiriyoni ezvinyorwa, mhinduro uye maforamu. Chengeta yako theme yekutsvaga uye unzwe
Ratidza Elasticsearch, Solr kana Algolia mibvunzo uye mhedzisiro muQuery Monitor plugin dashibhodhi.
Embed Chero Rugwaro
Tsvaga post mitundu ine zvinyorwa zvinosanganiswa ne Embed Chero Gwaro
Ratidza / uvanzi zvawanikwa zvichienderana nevashandisi vhezheni
WPML Yakagadzirira. Tsvaga zvirimo zvemitauro yakawanda. Dudziro yekutsvaga peji zvinyorwa uye mafirita zvinyorwa neWPML tambo module
Tsvaga zvirimo zvemitauro yakawanda. Dudziro yekutsvaga peji zvinyorwa uye mafirita zvinyorwa nePollang tambo module
Tsika Post Type UI
Ratidza faira efetera setup mune plugin. Index posttypes ine mafaera emhando
Tsvaga zvirimo pamatafura akaiswa mune ako mapepa emhando
Tsvaga mukati, uye tsvina neaya anotevera ACF munda mhando:
Basic: mameseji, mameseji, nhamba, password, url, email
Sarudzo: sarudza, cheki bhokisi, redhiyo, ichokwadi / nhema
Zvemukati: wysiwyg, faira url, faira id, faira rondedzero
Marongerwo: anodzokorora, anochinjika zvemukati, tebhu, dombo
Gadzirisa pengo rakakura mune Yoast SEO maitiro. Gadzira yakanakisa SEO urls uye meta tsananguro yemapeji ako ekutsvaga
Zvose muna One SEO Pack
Gadzira rakakura ggeti mune Zvese mune Imwe SEO Pack maficha. Gadzira yakanakisa SEO urls uye meta tsananguro yemapeji ako ekutsvaga
Speedup Woocommerce shopu uye zvikamu zvinotsvaga mune kamwe chete, zvine simba mafirita (cheki bhokisi, redhiyo, mutengo renji). Chengetedza yako yepamberi-kumagumo theme maficha uye tarisa uye unzwe
Speedup Kusimbisa kutsvaga mune imwechete kubaya, apo ichichengeta maitiro uye kutarisa uye kunzwa. Tsigira Kusimbisa mafirita: zvitaera, geolocation radius, mapoka
Speedup Rondedzero rondedzero kutsvaga mune imwechete konzera, apo ichichengeta ayo maficha uye tarisa uye unzwe.
Speedup MyListing kunyora pasi kutsvaga mune imwechete yekuchechesa, apo ichichengeta maitiro ayo uye anotaridzika uye anonzwa.
Speedup Jobify mabasa ekutsvaga mune imwechete yekupuruzira, apo ichichengeta iyo maitiro uye kutarisa uye kunzwa. Tsigira Jobify mafirita: nzvimbo, mhando dzebasa, zvikamu
Directory + theme
Speedup Dhairekitori + tsvaga mune kamwe chete, uku uchichengeta zviri maficha uye tarisa uye unzwe. Kurumidza kumhanyisa kutsvaga zvinhu, chikamu firita, nzvimbo firita, nharaunda firita, ine Solr uye Elasticsearch.
Yemahara Open sosi yekutsvaga injini. Ingoiisa pane yako server, uye rega WPSOLR ichengete.
AWS Amazon Elasticsearch basa
AWS Amazon Elasticsearch sevhisi ibasa reElasticsearch pane zvinodiwa izvo zvinoda kuzvinyorera kwayo. Kwayedzwa kusvika Elasticsearch 5.3
Kwayedzwa neWPSOLR yazvino vhezheni.
Bonsai ndeye Elasticsearch sevhisi pane iri kudiwa inoda kuzvinyorera kwayo. Kwayedzwa kusvika Elasticsearch 6.5.4
Kwayedzwa neWPSOLR yazvino vhezheni
CloudWays inopa Elasticsearch sevhisi pane chinodikanwa chinoda kuzvinyorera pachayo.
Kwayedzwa neWPSOLR yazvino vhezheni (hapana mhinduro kubva kune vatengi vedu yedambudziko kusvika zvino).
Kutsvaga ibasa reElasticsearch pane zvinodiwa izvo zvinoda kuzvinyorera pachazvo. Kutsvaga kunoedzwa kusvika kuElasticsearch 5.1.2
Hapana chakabatanidzwa (iyo pipi API inoita kunge isina kuchena)
Wodby inopa Elasticsearch sevhisi pane zvaida zvinoda kuzvinyorera kwayo.
Wodby inoedzwa kusvika kuElasticsearch 6.1.2
Kuedzwa neWPSOLR 20.5
Searchstax ndeye SolrCloud cluster (yakagoverwa kana imwechete server) sevhisi inoda kuzvinyorera kwayo. Kuwana kuzere kweSolrloud Cloud koni.
Kwayedzwa kusvika kuApache SolrCloud 6.4.2
Kuedzwa neWPSOLR 18.8
Opensolr ndeye Solr Service pane chinodikanwa chinoda kuzvinyorera pachayo.
Kuedzwa kubva kuWPSOLR 18.8 (uye shanduro imwe neimwe kubvira).
Solrfarm iSolr Service pane inoda iyo inonyorera yayo. Kuedzwa neWPSOLR 20.1 paWooCommerce.
Ipa huremu hwakawanda kuminda yaunoda kuisa yakakwirira mukutsvaga
Iwe unochengetedza dzinoenderana neWebhu saiti nzvimbo /multisites, uye unoshuvira kuunganidza yavo yekutsvaga mune imwe super search. Nekutenda, iwe unogona kuzadzisa izvo chete neWPSOLR's cross-domain search.
Mazano ane mazwi akakosha
Ratidza mazano ane mazwi akakosha mune chero bhokisi rekutsvaga
Mazano ane zvemukati
Ratidza mazano ane zvemukati mune chero bhokisi rekutsvaga
Mazano ane zvinyorwa zvemapoka
Ratidza mazano ane zvinyorwa zvemukati mune chero bhokisi rekutsvaga
WPSOLR yakabatana neAlgolia API.
Kopa yako Algolia Akaunti ID, yako Algolia API Key, uye wagadzirira.
Tsanangura imwe, kana makironi akati wandei, kuratidza yako data
Cron imwe neimwe inodaidzwa neyayo REST url. cURL rairo yakapihwa
Inovandudza kutsvaga nekutaurisa kwakaoma, se:
Ratidza zvinyoro NEZVakakodzera mhedzisiro (kazhinji, iwe waigona woronga uye uine nyowani OR yakakodzera)
Geolocation inosimudzira kutsvaga pamwe nenzvimbo kubva kunzvimbo yekushanya.
Mushanyi anogona kugadzirisa uye kuchera mhedzisiro zvichienda kure nekwaanogara.
Makiromita anogona zvakare kuwedzerwa kune zvawanikwa.
Rosette Chinyorwa Ongorora
Dhonzera Mabhizinesi kubva ku data rako uye ujoinise iwo semativi pakutsvaga kwako.
Fonera Amazon Nzwisisa API kuti ubvise Masangano kubva kudhata rako uye ujoye sezvikamu mukutsvaga kwako.
Fonera Amazon Rekognition API kuti ubvise Masangano kubva kumifananidzo yako uye ujoore sezvikamu mukutsvaga kwako.
Fonera Google Natural Mutauro API kuti utore Masangano kubva kudhata rako uye ujoye sezvikamu mukutsvaga kwako.
Fonera Google Vision API kuti ubvise Masangano kubva kumifananidzo yako uye ujoore sezvikamu mukutsvaga kwako.